NgoJulayi, ifilimu entsha yaseMerika "Kwithambo" kunye noKeanu Reeves kunye nentombi yomculi odumileyo uPhil Collins Lily uya kukhutshwa kwihlabathi. Iya kujongana nomdlalo osisigxina wezengqondo umculi osemtsha owamkhokelela ekubeni anorexia. Kwi-intanethi eyayingaphambi komboniso, u-Lily wavuma ukuba wayazi le ngxaki ngokwabo kwaye ebudeni bobuncinci bakhe wafumana ingxaki yokutya.
Ukufayiliza kumfanekiso, umdlali wesigqirha kwakhona kufuneka alahlekelwe ubunzima kakhulu. Enyanisweni, ngeli xesha le nkqubo yenzeke phantsi kolawulo olusisigxina lwe-dietitian kwaye, ngokukodwa, ngokuqeqesha ngokomoya. Umdlali we-actress watshela intatheli ngokunyanisekileyo ukuba uphazamisekile kwaye wayicinezele kangakanani unina xa wayefunda ngeengxaki zentombi yakhe. Ngako-ke, le nxaxheba uLily ufuna ukufikelela ekugqibeleni amantombazana amantombazana, ekhokela ekubeni yimeko engxamisekileyo ngenxa yokunyaniseka kokunciphisa umzimba.
Izinto eziphambili kwi-Life actress uLily Collins
Ngethamsanqa, umdlali we-actress wakwazi ukunqoba i-anorexia ngempumelelo, kodwa usalumkele ngokucophelela ukutya kwakhe. Ukuba ngaphambili, ngokulandela umlinganiselo omncinci, wayenqaba imveliso emininzi, ngokungahambisani nxamnye ne-sweet, umgubo kunye ne-calori ephezulu, kodwa ngoku umdlali wezabelo ubeka phambili ekudleni okunempilo. ULily ukhetha ukutya okukhulile kwimimandla yasemaphandleni, uthanda inkukhu, intlanzi, imifuno, izityalo, kwaye akadli inyama ebomvu. Umdlali wecala uyazikhusela iimveliso ezicutswa yi-chemistry, kwaye akayikupheka into ekhethiweyo. U-Collins uchitha ixesha elininzi kwindawo yokuzivocavoca, kodwa akasayikuzixhaphaza ngokunyamezela komntu okwenzeka ngaphambili:
"Ndandidla ukudibanisa indlela yokuphila enempilo kunye nohlobo olulungileyo lwesisu, kwaye ngoku ludibaniswe namandla kunye nempilo. Ukuba unamandla kwaye uyathemba, akunandaba nokuba lunjani uhlobo lokuxhaswa kwemisipha. Namhlanje ndiyayithanda ifomu lam. Umzimba wumhlobo ogcina intliziyo yam. Ndizama ukuqhuba ubomi obusebenzayo. Ndandithanda ukuziva ndibe netyala xa ndiphosakele uqeqesho, kwaye ngoku kuthetha nje ukuba ubomi bundifumana ezinye izinto ezithandekayo. "
Kwaye baninzi ebomini kwintombi enomdla kaPhil Collins. ULily uthanda u-journalism, uhamba kakhulu, uthanda ukuthatha imifanekiso, ukhokela iblogi kunye namaphupha okuzama ukuziqondisa.
I-Rye bran yokulahleka kwesisindo: iipropati, iiresiphi, ukukhulula umhla
Imifuno neziqhamo kwisondlo sethu
Iingcebiso ezilishumi, ukuba zingenangqiqo
Iipropathi zokuphilisa izityalo: ukusebenzisa, zokupheka, ukuchaswa
Ziziphi iivithamini eziqukethe i-birch sap?
Yiyiphi indlela kunye nendlela yokwenza itiye i-helba ngokufanelekileyo
I-saladi ye-Feta kunye neetamatisi zentanda
Masks ngobuso kunye neoli yepereji
Isobho kunye ne-giblets
Indlela ekhaya ukulahla amanqaku atyaliweyo esifubeni
AmaSandwich ngamakhowe, i-broccoli kunye noshizi
Hlulela nge-cognac kunye nekhofi
Isaladi yeklabishi yaseVilet